ပင်စင်လစာကိုတလုံးတည်းတွက်ချက် ပေးရန် အစီအစဉ်မရှိသေး … | ရိုဟင်ဂျာ လူမျိုးစု အသံ
ပင်စင်လစာကိုတလုံးတည်းတွက်ချက် ပေးရန် အစီအစဉ်မရှိသေး …
ခင်မျိုးသွယ် | သောကြာနေ့၊ ဖေဖေါ်ဝါရီလ ၀၁ ရက် ၂၀၁၃
ရန်ကုန် (မဇ္ဈိမ)။ ။ နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်း အငြိမ်းစားများ၏ ပင်စင်လစာကို တလုံးတည်း တွက်ချက်ပေးရန် အစီအစဉ်မရှိသေးကြောင်း ဘဏ္ဍာရေးနှင့် အခွန်ဝန်ကြီးဌာနက ဆိုသည်။
“အငြိမ်းစားတွေ၏ စားဝတ်နေရေးအတွက် အခက်အခဲမတွေ့စေရန်နဲ့ အငြိမ်းစား၏ ရေရှည် အကျိုးအတွက် ပင်စင်လစာကို လစဉ်ခံစားခွင့်အဖြစ် ဆက်လက်ထုတ်ပေးသွားမည်ဖြစ်ပြီး တလုံးတည်း တွက် ချက် ထုတ်ပေးရန် အစီအစဉ်မရှိသေးပါဘူး” ဟု ဇန်နဝါရီလ ၂၉ ရက်နေ့က ကျင်းပသည့် အမျိုးသားလွှတ်တော် အစည်းအဝေးတွင် ဒု-ဝန်ကြီး ဒေါက်တာလင်းအောင် က ပြောကြားခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းများ အငြိမ်းစား ခံစားခွင့် ရရှိသည့်အခါ မြို့ပြဝန်ထမ်း စည်းမျဉ်းဥပဒေများအရ ပင်စင်လစာနှင့် လုပ်သက်ဆုငွေကို ခံစားခွင့် ရရှိကြသည်။
“ပင်စင်ခံစားခွင့် ရရှိသည့် အချိန်တွင် လုပ်သက်ဆုငွေကို တလုံးတခဲတည်း ငွေလုံးငွေရင်းတရပ် အဖြစ် အသုံးပြုနိုင်ရန် ခံစားခွင့် ပြုပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ လစဉ် ပင်စင်လစာ ခွင့်ပြုခြင်းမှာ ဝန်ထမ်းဘဝက ရရှိခဲ့ သော လစာဝင်ငွေအစား ပင်စင်စားအတွက် လစဉ် စားသောက်စရိတ်အဖြစ် အသုံးပြုနိုင်ရန် အစားထိုးထုတ်ပေးတဲ့ လစဉ် ပင်စင်လစာ ထောက်ပံ့ငွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်” ဟု ဒုဝန်ကြီးက ဆက်ပြောသည်။
သို့သော် နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းဘဝက စုဆောင်းနိုင်ခြေ နည်းခဲ့သည့် ပင်စင်စားများအနေနှင့် ပင်စင်လစာကို တလုံးတဝတည်း ရယူလိုကြကြောင်း ပြောကြသည်။
“သက်ကြီး အငြိမ်းစားတွေထဲက လူများစုဖြစ်တဲ့ အောက်ခြေ ဝန်ထမ်းတွေအနေနဲ့ လုပ်သက်ဆုကြေးကလည်း များများစားစားမရ၊ ပင်စင်လစာကလည်း နည်းနည်းနဲ့ဆိုတော့ နိုင်ငံတော်အနေနဲ့ သက်ညှာ စွာဖြင့် ပင်စင်လစာကို တလုံးတည်းသာ ထုတ်ပေးရင် ရတဲ့ ငွေကြေးကို အရင်းအနှီးလေးလုပ်ပြီး ပုံမှန်ဝင်ငွေလေး ဖန်တီးနိုင်င်တာပေါ့။ ဒါကြောင့် ပင်စင်လစာကို တလုံးတည်းရဖို့ အများစုက မျှော်လင့် နေကြတာပါ” ဟု စက်မှု ဝန်ကြီးဌာနမှ စာရေးကြီးအဆင့်ဖြင့် အငြိမ်းစားယူခဲ့သူ ဦးမြင့်စိုး က ပြောသည်။
This entry was posted on February 1, 2013, in ပြည်တွင်းသတင်း. Bookmark the permalink.	Leaveacomment
← အစိုးရ၏အပြောင်းအလဲလုပ်ဆောင်ချက်များ ကတိတွေအတိုင်းဖြစ်မလာ
ရိုဟင်ဂျာအရေး ၀ိုင်းဝန်းဖြေရှင်းဖို့ UNHCR တိုက်တွန်း →